आजदेखि ग्लोबल आइएमई बैंकको ऋणपत्र निष्कासन हुँदै, ब्याजदर कति ? – Investing Nepal
आजदेखि ग्लोबल आइएमई बैंकको ऋणपत्र निष्कासन हुँदै, ब्याजदर कति ?
By: Nepse Direct Mar 14, 2021
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड GBIME 0.24 % 425.00 को ऋणपत्र चैत १ गते, आजदेखि निष्कासन हुने भएको छ । कम्पनीले १० वर्षको अवधिको ‘८ दशमलव ५० प्रतिशत ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/८७’ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले प्रतिऋणपत्र १ हजार अंकित मूल्यका रू. ३ अर्ब बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । निष्कासन गर्ने कुल कित्तामध्ये रू. १ अर्ब ८० करोड बराबरको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत तवरबाट र बाँकी रहेको रू. १ अर्ब २० करोड बराबरको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणहरुमा विक्री गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरिएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ६० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ ।
उक्त ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १० लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको उक्त ऋणपत्रमा छिटोमा चैत ४ गते र ढिलोमा चैत १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको ऋणपत्रलाई इक्रा नेपालले न्यून कर्जा जोखिम जनाउने इक्रा एनपी एल ए माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ । उक्त रेटिङ प्राप्त वित्तीय उपकरणलाई समयमा नै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित मानिन्छ । त्यस्तै, उक्त बैंकलाई इक्रा नेपालले औषत कर्जा जोखिम जनाउने इक्रा एनपी आई आर ए माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
ऋणपत्रको विक्री प्रबन्धक सेञ्चुरी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । आवेदकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सि-आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
GBIME , GBIMEP